कोरोनासँग लड्न 'गोमुत्र' पार्टी, गाईको गहुँत ट्रम्पलाई पनि पठाइने
कोरोनासँग लड्न ‘गोमुत्र’ पार्टी, गाईको गहुँत ट्रम्पलाई पनि पठाइने
एजेन्सी, ३ चैत । सारा विश्वभर फैलिएको कोरोनाका कारण अमेरिकामा आपतकाल नै घोषणा गर्नुपरेको छ । हालसम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ६८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै संक्रमितहरुको संख्या २७१७ पुगेको छ ।
यसै क्रममा अखिल भारतीय हिन्दू महासभाका सदस्यहरूले कोरोना भाइरस रोक्नका लागि नयाँ तरिका अपनाएका छन् । हालै हिन्दू महासभाका सदस्यले कोभिड-१९ रोक्नका लागि ‘गोमुत्र’ (गाईको गहुँत) पार्टी आयोजना गरेका थिए ।
उक्त पार्टीबारे बलिउडका निर्देशक अनुराग कश्यपले रियाक्ट गरेका छन् । कश्यपले आफ्नो ट्विटर ह्वान्डलमा एक भिडियो शेयर गरेका छन् । उक्त भिडियोमा हिन्दू महासभाका सदस्यहरूले प्राणघातक कोरोना भाइरसबाट बच्न गाईको गहुँत उपयोगी हुने बताएका छन् ।
कश्यपले शेयर गरेको भिडियोमा हिन्दू महासभाका सदस्यले भनिरहेका छन्- ‘हामी सरकारसँग विमानस्थलमा शराबमाथि प्रतिबन्ध लगाउन र शराबको ठाउँमा गाईको गहुँत र गोबर राख्न माग गर्छौं ।
ट्रम्पलाई पनि गाईको गहुँत पठाउँदैछौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि पठाइने छ । प्रधानमन्त्रीलाई पठाइने छ । प्रधानमन्त्री (मोदी) ले गहुँत पिउने पनि गर्छन् ।’
त्यस्तै कश्यपले भिडियोलाई शेयर गर्दै ‘राम्रो दिन’ भनेर क्याप्शन पनि राखेका छन् । उक्त भिडियोबारे अन्य मानिसले पनि कमेन्ट गरिरहेका छन् ।
सुरुमा चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस भारतमा पनि फैलिएको छ । हालसम्म भारतमा ९३ नयाँ भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् भने २ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
गाईको गहुँत तथा गोबरमा झण्डै १४८ खाले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भएको तथ्य विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
गोमुत्र मुटुरोगका लागि पनि लाभदायक रहेको तथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ ।
रुसका वैज्ञानिकहरूले रेडियोधर्मी कणको प्रभाव नष्ट गर्ने क्षमता गाईको दूध, दही, घ्यू, गहुँत र गोबरमा हुने पत्ता लगाएका छन् ।
अमेरिकाले गाईको गहुँतमा शोध गरी गोमूत्रबाट बन्ने पाँचवटा औषधिको ‘पेटेन्ट राइट’ लिइसकेको छ ।
त्यस्तै भारतले पनि गाईको गोबरमा अनुसन्धान गरी ४८ वटा औषधिको ‘पेटेन्ट राइट’ लिएको छ ।
कुन क्लबले किन्न सक्ला त साञ्चोलाई ?
साउललाई अनुबन्ध गर्न म्यानचेस्टर युनाइटेडको तयारी
कोरोनाविरुद्ध लड्न म्यानचेस्टर सिटीले आफ्नो रंगशाला प्रयोग गर्न दिने
बार्सिलोना फर्कन चाहन्छन् जाभी
भारतमा कोरोना भाइरसः आइतबारमात्रै तीन जनाको मृत्यु
युकेमा कोरोना भाइरस: यस्तो छ पछिल्लो रिपोर्ट
इटालीमा कोरोना भाइरसः कति पुग्यो संक्रमित र मृतकको संख्या ?
अमेरिकामा कोरोना भाइरसः दैनिक १८ हजारभन्दा बढीले थपिन थाले संक्रमित
मास्क लगाएर मन्त्रिपरिषद् बैठक, हेर्नुहोस् तस्बिर
लकडाउनको अवधि थप्ने सरकारको निर्णय
कोरोना भाइरससम्बन्धी सबै सूचना स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेवसाइटमै उपलब्ध हुने